भिजन हुनेले त हो चुनाव जित्ने - GBM
भिजन हुनेले त हो चुनाव जित्ने
सागरप्रताप राणा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा नगरप्रमुख पदको प्रत्याशी हुनुहुन्छ । तत्कालिन नगरपञ्चायतमा बि.सं. २०३९ र २०४३ सालमा प्रधानपञ्च तथा बि.सं. २०५४ सालमा नगरपालिकाको नगरप्रमुखमा बिजयी भएर काम गरेका राणा चौथो पटक मेयरमा जितेपछि स्थानीय निकायमा हुने भ्रष्टाचार र बेथिति हटाई शुद्धीकरण शुरु गर्ने बताउनुहुन्छ । राप्रपाको जिल्ला अध्यक्ष तथा केन्द्रीय पार्षद, नेपाल नेत्रज्योति संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश सभापति, लुम्बिनी नेत्रबिज्ञान अध्ययन संस्थान ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, नेपाल परिवार नियोजन संघ, लायन्स क्लब, जेसिजका मानार्थ सदस्यलगायत राजनीति र समाजसेवामा क्रियाशील राणासँग गौतमबुद्ध सन्देश दैनिकले बैशाख ३० मा हुन गैरहेको निर्वाचनको सन्दर्भलाई लिएर कुराकानी गरेको थियो । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सारसंक्षेप ।
· सिद्धार्थनगरमा राप्रपाको चुनावी अभियान कस्तो छ ?
राणा ः एकदमै राम्रो भैरहेको छ । संगठित भएर अगाडि बढिरहेका छौं । माहौल एकदमै राम्रो बनिरहेको छ । नगरबासीहरु सकारात्मक देखिनुभएको छ ।
· प्रचार प्रसारको समय कम रह्यो यसपटक । घरदैलो गर्न भ्याउनु भयो त ?
राणा ः हो, यसपटक प्रचारप्रसारका लागि समय कम भयो । पुरै नगरबासीका घरघरमा पुग्न सकिएन । समुह समुहमा भेटघाट भैरहेको छ । घरदैलो गर्दै गर्दा समुदायसँग एकैपटक भेटघाट गरेर समय मिलाउनु पर्ने बाध्यता देखियो ।
· नगरबासीका प्रतिक्रिया के कस्तो पाउनुभयो ?
राणा ः एकदमै सकारात्मक हुनुहुन्छ, नगरबासीहरु । खासगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बढ्दो प्रभाव र मेरो उमेदवारीलाई लिएर आम जनतामा उत्साह देखिएको छ । हिजो र आजको हेरेर भोलि के गर्ने भनेर जनतासँग छलफल अन्तरक्रिया भएका छन् । जसले गर्दा मलाई पनि उत्साह थपेको छ ।
· तपाईंका चुनावी एजेण्डाहरु के के हुन् ?
राणा ः म नगरलाई स्वीजरल्याण्ड वा सिंगापुर बनाउँछु भन्दिन । यस नगरलाई सिद्धार्थनगर नै बनाउने हो । नगरलाई हेर्नलायक, देख्नलायक र अनुभूति गर्न लायक बनाउने हो । मैले अहिले यो यो गर्छु भन्नुभन्दा पनि नगरबासी जनताको आवश्यकता र माग अनुसार योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्दै जाने हो । मलाई लागेको रहरभन्दा पनि नगरमा रहेका आम बुद्धिजीवीको राय, सल्लाह, सुझाव, नगरबासीको आवश्यकता र मागलाई समेटेर नगरबासीको बिज्ञता र अनुभवका आधारमा नगरको विकास गर्ने हो । मैले त्यसैलाई जनतासमक्ष बनाउने गरेको छु । यो नगर अन्तर्राष्ट्रिय नाका र पर्यटकीय गन्तब्य पनि भएकाले त्यसै अनुसार विकास गर्न जरुरी छ ।
· तपाईंलाई पञ्चायत कालमा प्रधानपन्च भएको मान्छे अहिले पनि चुनावी मैदान छाडेन भनेर टिप्पणी गर्नेहरु पनि छन् नि ?
राणा ः लौ, जसले गर्न सक्छ, जोसँग भिजन छ, उही आउने त हो नि । हेर्नुस् न एउटै मान्छे कतिचोटी प्रधानमन्त्री भएका छन् । उनलाई केहि नभन्ने त ? उनीहरु जतिपटक पनि हुन हुने अरु हुन नहुने हो ? नगरलाई बनाउन सक्ने भिजन भएको मान्छे १० पटक पनि दोहोरिन सक्छ नि । बनाउन नसक्नेहरु आए अनि गए, देखिएकै छ त ।
गएको पाँच बर्ष सिद्धार्थनगरका लागि स्वर्णकाल थियो । केन्द्र र प्रदेशमा आफ्नै सरकार, नगरमा पनि पूर्ण बहुमत । त्यस्तो हुँदा त झिंगा मार्न सकेन । यस्तो सुअवसर बिरलै आउँछ । यसैबाट बुझ्न जरुरी छ कि भिजन भएको मान्छेलाई किन जिताउनुपर्छ ।
· नगरका बासिन्दाले तपाईंलाई नै किन रोज्ने त ?
राणा ः म नगरबासीसँग काममा परिक्षण भैसकेको ब्यक्ति हुँ । मेरो पालामा जे जस्ता संरचना बने, खै अरुका पालामा बनेको ? मेडिकल कलेज मेरै पहलमा स्थापना भएको हो, जसले यस क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवामात्र होइन, रोजगारी, ब्यापार ब्यवसायमा बृद्धि भएको छ । आँखा अस्पताल नै हेरौं । अन्य देशमा समेत उपचारका लागि लोकप्रिय छ, यसले रोजगारी र अन्य अवसर प्रदान गरेको छ । बसपार्क मैले नै बनाएको हो । यसले यस नगरलाई देशका सबै जसो शहरहरुसँग जोड्ने काम गरेको छ । मृत्युपछि गरिने अन्तिम संस्कार गर्ने ठाउँ स्वर्गद्धारी घाट, रंगशाला, बुद्धचोक, देवकोटाचोक लगायमा बुद्धमूर्ति राख्ने आदि जे जति छन्, सबै मेरै पालामा भएका हुन् । यिनै संरचना र मैले गरेका काम आम नगरबासीले देख्नुभएकै छ । त्यसैले मलाई नै रोज्नुहुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
· एकातिर राप्रपा विभाजित भएको अवस्थामा ठूला र बलिया पार्टीहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपरेको छ नि त ।
राणा ः हाम्रो पार्टीलाई विभाजित भन्नै मिल्दैन । एउटा बहुलठ्ठी मान्छे पार्टीबाट गएको हो । पार्टीको नेतृत्व गरेर पार्टीलाई डुबाएको, बन्धक बनाएको मान्छे निस्किएको हो । पार्टी शुद्धीकरण भएको छ । राजेन्द्र लिङदेनको नेतृत्वमा पार्टी एकदमै राम्रो र मजवुत भएको छ । देशै राप्रपामय बनेको छ । हामी त ठूला पार्टी मात्र होइन, गठबन्धनसँग लड्दै छौं र उनीहरुभन्दा अगाडि छौं ।
· उसो भए चुनाव जितिन्छ ?
राणा ः मजाले । किनभने देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनु छ । विकास निर्माण गरेर समृद्धि ल्याउनु छ । हाम्रो पार्टीले भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत पिउनु हो भनेर हामी सबैलाई शपथ खुवाएको छ । देशमा अरु पार्टीले थोपरेका विकृति, बिसंगति, अनियमितता र भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी जनताप्रति जवाफदेहि बन्ने तथा विकास निर्माणको अगुवाई गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि राप्रपाले शानदार बिजय हासिल गर्छ ।
· प्रतिष्पर्धा कोसँग हुन्छ त ?
राणा ः मैले त प्रतिष्पर्धी नै देखेको छैन । जनताको हामीप्रतिको आकर्षण र चाहनाले गर्दा कडा प्रतिष्पर्धा हुँदैन ।
· अन्त्यमा मतदाता समक्ष केहि भन्नु छ ?
राणा ः मेरा प्रिय नगरबासी मतदाताहरुलाई पार्टीभन्दा माथि उठेर नगरको विकास, नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमतावान उमेदवार छान्न अनुरोध गर्न चाहान्छु । त्यसका लागि एकमात्र योग्य तथा अनुभवी उमेदवार राप्रपाबाट हलो चिन्ह लिएर म आएको छु । मलाई अवसर दिनुहोस्, म तपाईंहरुका सपना साकार पार्ने छु । नगरपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने छु ।
← भ्रष्टाचारमुक्त नगर मेरो प्राथमिकता
मतदाता नतर्साऊ →
२०७९ बैशाख २५ gautam buddha sandesh	0
२०७५ बैशाख ५ gautam buddha sandesh	0